Mawduucyada Andy Hamblin ee Martech Zone |
Maqaallada by Andy Hamblin
Warshadaha xayeysiinta ee Dibedda waa warshad aad u weyn oo faa'iido badan. Xilligan jahawareerka dhijitaalka ah, ku xirnaanta macaamiisha markay "tagayaan" meelaha caamka ah wali qiimo weyn ayey leedahay. Boodhadhka, hoyga basaska, boorarka iyo xayeysiinta gaadiidka ayaa dhamaantood ka mid ah nolosha macaamiisha maalin kasta. Waxay bixiyaan fursado aan tiro lahayn si ay si cad ugu baahiyaan fariin dhagaystayaasha khuseeya iyagoon u tartamin fiiro gaar ah kumanaan xayeysiis oo kale. Laakiin had iyo jeer ma fududa in